Showing 241 results, ordered by Latest first.
Zimbabwe: Coventry Launches Culture Week allAfrica, 19 May 2020, Zimbabwe
Youth, Sport, Arts and Recreation Minister Kirsty Coventry has encouraged arts practitioners to use various online platforms to celebrate Culture Week, which kicked off yesterday. She made the remarks during an online address to launch the week that will run up to May 23 under the theme "Zimbabwe @ 40: Celebrating our Cultural Diversity and Heritage".
Minister Coventry launches 2020 culture week National Arts Council of Zimbabwe, 18 May 2020, Zimbabwe
National Arts Council of Zimbabwe to host ResiliArt debate Music in Africa, 12 May 2020, Zimbabwe
The National Arts Council of Zimbabwe (NACZ) will on 14 May host a ResiliArt virtual debate to discuss the impact of COVID-19 on local events.
Youth must lead fight against COVID-19 National Arts Council of Zimbabwe, 11 May 2020, Zimbabwe
National Arts Council of Zimbabwe Director Mr Nicholas Moyo, says young people need to play a big role in the protection and mitigation initiatives against the spread of the deadly COVID-19 disease.
Coronavirus: NACZ, Unesco seek ways to assist artistes Herald, 07 May 2020, Zimbabwe
The National Arts Council of Zimbabwe (NACZ) in conjunction with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) will today engage stakeholders in the creative sector to seek ways of cushioning artistes from the effects of Covid-19.
NACZ Receives COVID19 Assistance For Bulawayo Artists National Arts Council of Zimbabwe, 04 May 2020, Zimbabwe
The National arts council of Zimbabwe has received mealie-meal for distribution to artists in Bulawayo, whose livelihoods have been affected by the COVID19 global pandemic and the subsequent measures instituted by the government to curb its spread.